आजदेखि अनलाइनबाटै राफसाफ सेवा सुरु,चेक बोकेर ब्रोकर कार्यालय जाने झन्झटबाट मुक्ति « Nepal Bahas
आजदेखि अनलाइनबाटै राफसाफ सेवा सुरु,चेक बोकेर ब्रोकर कार्यालय जाने झन्झटबाट मुक्ति
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:४९
काठमाडौं । के तपाई अनलाइनबाटै शेयर खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तेसो अब चिन्ता लिनु पर्दैन शेयर खरिद गर्दा खाताबाटै राफसाफ हुने सेवा आइतबार आजबाट सुरु भएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ‘नेप्से’ को अनलाइन शेयर कारोबार प्रणालीमा आवद्ध यो सुविधा तपाई पनि लिन सक्नु हुनेछ । योसँगै शेयर खरिदपछि लगानीकर्ताले चेक बोकेर ब्रोकर कार्यालय जाने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको ‘कनेक्ट आइपीएस’ मा हाल आवद्ध ४८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता भएका लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै राफसाफ गर्नसक्ने जनाएको छ ।
यस्तै, आजबाट थप २ वाणिज्य बैंकले कनेक्ट आइपीएसमा सदस्य बन्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । यी सबै बैंकमा खाता भएका अनलाइन प्रयोगकर्ताले शेयर खरिद गरे वापतको रकम अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने क्लियरिङ हाउसले जानकारी गराएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका अनुसार हाललाई शेयर खरिद गर्दा मात्र अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने छ । दोस्रो चरणमा सेयर बिक्री बपत प्राप्त रकम पनि खातामै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी दिनमा कटेक्ट आइपीएसमा जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि बढ्न सक्ने क्लियारिङ हाउसले जनाएको छ ।
खरिदबिक्रीको सीमा कति ?
नेपाल क्लियरिङ हाउसका अनुसार खरिदबिक्री रकमको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार हुनेछ । राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट बैंकिङबाट एक खाताबाट अर्को खातामा रकम पठाउँदा एक पटकमा १ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
्यस्तै, इन्टरनेटबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा दैनिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाभित्र रहेर अनलाइन राफसाफ गर्न सकिने क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ ।